Akụkọ - Kedu mgbe osisi ite gbanwere ite? Esi gbanwee ite?
Kedu mgbe osisi potted na-agbanwe ite? Esi gbanwee ite?
Ọ bụrụ na osisi anaghị agbanwe ite, uto nke usoro mgbọrọgwụ ga-ejedebe, nke ga-emetụta mmepe nke osisi. Tụkwasị na nke ahụ, ala dị n'ime ite ahụ na-arịwanye ụkọ na-edozi ahụ ma na-ebelata ịdị mma n'oge uto nke osisi ahụ. N’ihi ya, igbanwe ite ahụ n’oge kwesịrị ekwesị nwere ike ime ka ọ dị ọhụrụ.
Kedu mgbe a ga-emegharị ahịhịa?
1. Debe mgbọrọgwụ nke ahịhịa. Ọ bụrụ na mgbọrọgwụ agbatị n'èzí ite ahụ, ọ pụtara na ite ahụ pere mpe.
2. Debe akwụkwọ nke ahịhịa. Ọ bụrụ na epupụta dị ogologo ma pere mpe, ọkpụrụkpụ ahụ na-adịwanye njọ, na agba ahụ na-adịwanye mfe, ọ pụtara na ala adịghị edozi ahụ, ala ọ dịkwa mkpa iji ite dochie ala ahụ.
Kedu otu esi ahọrọ ite?
Nwere ike izo aka na uto nke osisi, nke dị 5 ~ 10 cm karịa nke mbụ dayameta ite.
Esi repot osisi?
Akụrụngwa na akụrụngwa: ite ifuru, ala ọdịnala, nkume pel, ịkwa osisi ugbo, shọvel, vermiculite.
1. Were osisi sitere na ite ahụ, jiri nwayọ pịa ala ala na mgbọrọgwụ na aka gị iji tọpụ ala, wee dozie mgbọrọgwụ n'ime ala.
2. Chọpụta ogologo nke mgbọrọgwụ echekwara dịka oke osisi ahụ. Nnukwu osisi ahụ, ogologo oge ahụ ga-agbanye mkpọrọgwụ. Ohaneze, mgbọrọgwụ ahịhịa na okooko osisi na mkpa ịdị ihe dị ka 15 cm n'ogologo, na ngafe akụkụ na-ebipụ.
3. Iji leba anya na ikuku ikuku na njigide mmiri nke ala ọhụrụ, vermiculite, pearlite, na ala ọdịbendị nwere ike ịgwakọta n'otu n'otu na 1: 1: 3 dị ka ala ite ọhụrụ.
4. Tinye ala agwakọtara na ihe dịka 1/3 nke ịdị elu nke ite ọhụrụ ahụ, jiri aka gị kpatụ ya ntakịrị, tinye ya na osisi, wee tinye ala ahụ ruo mgbe ọ bụ 80% zuru.
Esi lekọta osisi mgbe ị gbanwere ite?
1. Osisi ndị emebigoro edegharị adịghị adabara ìhè anyanwụ. A na-atụ aro ka itinye ha n'okpuru eaves ma ọ bụ na mbara ihu ebe ọkụ dị ma ọ bụghị ìhè anyanwụ, ihe dịka ụbọchị 10-14.
2. Emela nri fatịlaịza na osisi ọhụrụ. Ọ na-atụ aro ka ifatilaiza 10 ụbọchị mgbe na-agbanwe ite. Mgbe ị na-azụ nri, were obere ifuru fatịlaịza ma fesaa ya n'elu ala.
Kpoo cuttings maka oge
Oge opupu ihe ubi bụ oge dị mma maka ahịhịa ịgbanwe ite na kwachaa, belụsọ ndị na-eto. Mgbe kwachaa, ịkpụ kwesịrị ịdị ihe dịka 1 cm site na obere petiole. Ihe ncheta pụrụ iche: Ọ bụrụ n'ịchọrọ imeziwanye ọnụego lanarị, ị nwere ike gbanye ntakịrị uto mgbọrọgwụ hormone na ọnụ ọnwụ.